| ချည်မျှင် Tours မှ Odisha Explore + 91-993.702.7574: မှာပိုခေါ်ရန်များအတွက်
သင်အနုစိတ်ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ချည်မျှင်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံရသည်ဟူသောစကားလုံးကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားရရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာကြပြီ။ သဲကျောက်စရစ် '' ချည်မျှင် Tours မှ Odisha သင် Odisha ရဲ့ထူးခြားတဲ့အထည်အလိပ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ အိန္ဒိယပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်ယှဉ်ပြိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဈေးအပေါဆုံးတိုင်းပြည်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Odisha ဟာအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ Odisha ၏ handlooms ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကောင်းချီးနဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းထိုကဲ့သို့သော Sambalpuri, Bomkei နှင့် Berhampuri အဖြစ် Odisha အတွက်တည်ရှိပါပွီ။ Odisha လည်းယက်လုပ်ခြင်း၎င်း၏ Ikat အမျိုးအစားကျော်ကြားသည်။ သငျသညျချည်မျှင်ခရီးစဉ် Odisha များ၏အကူအညီဖြင့်ထိုအအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ကြနိုင်ပါတယ်။ ချည်မျှင်နှင့်အထည်သူတို့အစပြုရှိရာနေရာများကိုလူမှုသမိုင်းကိုထင်ဟပ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှု artefacts ဖြစ်ကြသည်။ အိန္ဒိယတွင်အထည်သူတို့ကိုပထဝီနှင့်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုပုံစံများအတွက်မတူကွဲပြားမှုတငျပွ, ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အထည်အမျိုးအစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒါပေမယ့်လည်းဒီဇိုင်းထဲမှာမသာ, သိသိသာသာနေရာအရပ်မှခြားနားသည်။ သဲကျောက်စရစ် '' ချည်မျှင် Odisha သင်အထည်အလိပ် artefacts နှင့်အဝတ်များစုံလင်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်သေချာပါလိမ့်မယ် tours ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Odisha ချည်မျှင် Tour Packages အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်နိူးဖြစ်ကြပြီး Odisha ၏အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုလားသူကလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 14 ရက်ကြာခရီးစဉ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အ Olasingh ချည်မျှင်ကျေးရွာ, Chikiti ချည်မျှင်ကျေးရွာ, Sagarpalli နှင့် Buttupalli န်းကျင် Sambalpuri ချည်မျှင်ကျေးရွာ, Barapalli ချည်မျှင်ကျေးရွာ, Attabira ချည်မျှင်ကျေးရွာ, Sericulture စီမံကိန်းများနှင့် Tussar ပိုးကျေးရွာများအတွက် Bhubaneswar, Nuapatna နှင့် Maniabandha ကျော်ကြားဖုံးလွှမ်း။ သငျသညျဤလှပသော Odisha ချည်မျှင်ခရီးသွားတွေ့ကြုံခံစားရန်မစောင့်သင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုးနှင့်ငါတို့သည်အရာအရာကြွင်းလေစွန့်ခွာ။
စျေးနှုန်း: 51198 | tour Code ကို: 009
နေ့ 01: Arrival
တွေ့ဆုံ & pre-ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဟိုတယ်ကိုလွှဲပြောင်းထို့နောက် Bhubaneswar လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှာဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့နှုတ်ဆက် & ။ အချိန်ပါမစ်ရှိလျှင်, 07th ရာစုအေဒီမှ 12th ရာစုအေဒီ၏ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း၏ခရီးစဉ်သည်။ နေ့ချင်းညချင်းမှာ Bhubaneswar.
နေ့ 02: BHUBANESWAR - DHENKANAL
Nuapatna (IKAT ယက်လုပ်ခြင်းရွာ) နှင့် Sadeibarini (Dhokra ကျေးရွာ Casting) မှ Dhenkanal en-လမ်းကြောင်းခရီးစဉ်ကိုမှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ။ နေ့ချင်းညချင်း Dhenkanal မှာ။
နေ့ 03: DHENKANAL - SAMBALPUR
Sambalpur.Afternoon မှနံနက်စာ drive ကိုပြီးနောက်အချို့သောဒေသခံယက်လုပ်ခြင်းရွာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Sambalpur မှာ။
နေ့ 04: SAMBALPUR - BARGARH - BARPALI - BALANGIR
Bargarh ယက်လုပ်ခြင်းကျေးရွာနှင့် Barpali ပိုးယက်လုပ်ခြင်းကျေးရွာမှတဆင့် Balangir မှနံနက်စာရရှိသောပြီးနောက် (Barpali ၏ရွာသားတွေ Tussar ပိုးရဲ့အကောင်းဆုံးသမားများမှာ) ။ နေ့ချင်းညချင်း Balangir မှာ။
နေ့ 05: BALANGIR - SONEPUR - BALANGIR
Sonepur ယက်လုပ်ခြင်းကျေးရွာမှနံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးပြီးနောက်။ နေ့ချင်းညချင်း Balangir မှာ။
နေ့ 06: BALANGIR - GOPALPUR (GANJAM)
Padmanavpur ယက်လုပ်ခြင်းကျေးရွာမှတဆင့် Gopalpur မှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ။ နေ့ချင်းညချင်း Gopalpur မှာ။
နေ့ 07: ထွက်ခွာ
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မှစ. ခရီးပြန် Berhampur မီးရထားဘူတာ / Bhubaneswar လေဆိပ်မှမောင်းနှင်။